Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) - Hello Sayarwon
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း)
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Panangin ကို မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲခြင်း၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီစီယမ် လိုအပ်ချက်များခြင်း၊ သံဓါတ်အရနည်းခြင်းနှင့် သိသာသည့် လျှပ်ကူးသတ္တုဓါတ်များ ချို့တဲ့ရာတို့၌ အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Panangin ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးပမာဏ အချိန်အတိုင်း သောက်ပါ။
Panangin အားမသုံးခင် ဆေးအညွှန်းကို ဖတ်ပါ။
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Panangin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Panangin ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Panangin ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Panangin အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Panangin အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိနေလျှင် Panangin အား မသုံးခင် ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း – Panangin ၊ ၎င်းတွင်းပါသော ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်လျှင်၊ ထိုပစ္စည်းများကို အညွှွန်းစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။.
Varogel နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သည့် တခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ဥပမာ – နာတာရှည်နှင့် ရုတ်တရတ်ပြင်းထန် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ သွေးတွင်းထဲ၌ ပိုတက်စီယမ်ပမာဏများခြင်း၊ Atrioventricular blockade, နှလုံး အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ခြင်ဒ၊ နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးဂလိုင်ကိုစိုက်ဆေးများသုံးခြင်း၊ သွေးတွင်းပိုတက်စီယမ် နည်းခြင်း၊ သွေးတွင် မဂ္ဂနီစီယမ်နည်ခြင်း၊ အစာအာဟာရတွင် မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်များ မပါခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ပင် Panangin တွင်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်တာရှားပြီး နောက်ထပ်ကုသမှုခံရသည်အထိ မဖြစ်ပါ။ သို့သော် သင့်၌ဆေးသောက်ပြီးနောက် ပြဿနာများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုတင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Panangin သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ tetracycline, iron salts and sodium fluoride (a hour break between meals), ACE inhibitors, beta-adrenoblokatorami, ziklosporinom, kalisberegatmi dioretikami, geparinom အစရှိသည်များ…
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Panangin က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Panangin ပမာဏမှပါတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သာမန်ဖြစ်ရပ်များတွင် – Panangin ကနဦးပမာဏမှာ တစ်ရက်လျှင် ဆေးပြား ၁- ၂ ပြား သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များ ဥပမာ human coronary circulation, rejecting naperstanki drugs အစရှိသည်များ၌ ကနဦးပမာဏသည် သုံးပြားသုံးကြိမ် သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂-၃ ပတ်ပြီးနောက် Panangin ပမာဏကို တစ်ရက်လျှင် ၁ ပြား ၂-၃ ကြိမ်ထိ လျော့ချရမည်ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းအား အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်၌ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Panangin (Gideon Richer) (ပနန်ဂျင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Panangin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုးဆေး; Magnesium Aspartate 40 mg; Potassium Aspartate 45.2 mg / ml.
သောက်ဆေးပြား; Magnesium Aspartate 140 mg; Potassium Aspartate 158 mg.
Panangin ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Panangin. http://healthtipsing.com/en/pages/91215 . Accessed October, 21, 2016.
Panangin. http://medadv.info/en/pages/292538 . Accessed October, 21, 2016.
Panangin. http://www.ndrugs.com/?s=panangin . Accessed October, 21, 2016.
Panangin. http://pharmabook.net/en/organotropnye-sredstva/serde4no-sosudistye-sredstva/antiaritmi4eskie-sredstva/panangin.html . Accessed October, 21, 2016.